I-Conservation Water-News-FengQiu Group Co, Ltd.
Amanzi angumthombo wokuphila, ukhiye wokukhiqiza, kanye nesisekelo semvelo. Kuyisisekelo sokusinda nentuthuko yomphakathi wesintu. Ukusindisa ukusetshenziswa kwemithombo yamanzi nokuvikela izinsiza zamanzi kungumsebenzi nesibopho sazo zonke izakhamizi. Kuphela kungukuqinisa ukwakhiwa komphakathi owonga amanzi nokwakha umkhiqizo ophucukile wesayensi nowokugcina amanzi emphakathini wonke lapho sikwazi ukuqinisekisa ukusetshenziswa okuhle kwezinsiza zamanzi. Ngokuhambisana nesimo sangempela senkampani yethu, kuhlongozwa izindlela ezilandelayo zokonga amanzi:
1. Ukuqinisa ukukhuthaza ukulondolozwa kwamanzi, ukuze ukuqwashisa ngokulondolozwa kwamanzi kugxile ezinhliziyweni zabantu. Wonke umuntu usungula umqondo wokuthi "wonga inkazimulo, ihlazo nehlazo", ukuqala ngakunye, ukuqala kimi, ukuqala ezintweni ezincane, ukukhula izindlela zokugcina amanzi ezinhle kudala isimo esihle senhlalo sokuthanda amanzi, amanzi namanzi, futhi kugadiwe ukuvikela ngokuhlanganyela nokusebenzisa izinsiza zamanzi.
2. Bonke abasebenzi kufanele bavuselele ukuqwashisa kwabo ngokulondolozwa kwamanzi, batadishe ngenkuthalo ulwazi lokonga amanzi, bathuthukise izindlela zokonga amanzi, basebenzise izinto zokonga amanzi, banamathela ekusebenziseni amanzi, babheke konke ukulahla kwamanzi, balwele ukuba yimodeli nophromotha kwezesayensi. ukongiwa kwamanzi.
3. Qinisekisa ukulungiswa kwezinsuku zonke nokuphathwa kwezinsiza zamanzi nemishini, ukuqeda “ukusebenzisa nokudonsa”, ukwenza umsebenzi wokuvuselela amanzi ngenkuthalo, futhi usebenzise izinto zokonga amanzi ukwenza ngcono ukusebenza kwamanzi. Indawo eluhlaza yalolu phiko isebenzisa izindlela zokunisela zokonga amanzi ezinjengokunisela nge-Sprink, i-micro-irrigation kanye ne-drip irrigation.
4. Khuthaza ngamandla futhi usebenzise ubuchwepheshe obusha bokugcina amanzi, ubuchwepheshe obusha, kanye nemishini emisha, uguqule ubuchwepheshe bendabuko bokusebenzisa amanzi, uthuthukise ukusetshenziswa kwamanzi, futhi wonge amanzi futhi unciphise ukuphuma.
Ukulondolozwa yikhono lesiko lesizwe sama China, futhi ukongiwa kwamanzi kudinga imizamo ehlanganyelwe yomphakathi wonke. Ukusindisa nokuvikela izinsiza zamanzi, ukuqala kimi, ukuqala kusukela manje, wonke umuntu wenza umkhuba wokonga amanzi, wonke umuntu uzinikela ukukhuthaza ukongiwa kwamanzi, avumele amanzi okuphila ageleze.
Edlule: WEFTEC SHOW 2019